यसैगरी जानुपर्छ तिमी पनि एकदिन | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
यसैगरी जानुपर्छ तिमी पनि एकदिन
Posted on मार्च 21, 2010 by मनोज काफ्ले
मनोज काफ्ले ‘मनसुन’ / कुवैत
सबै नेताहरूमा चेतना होस एक दिन तिमी पनि जानुपर्छ। के लानु छ र यहाँबाट ?
श्रद्धाञ्जलिः गिरिजाप्रसाद कोइराला
आज एउटा अभिभावक गुमाएको महसूस भइरहेको छ नेपालका अधिकांशलाई। बाँचुञ्जेल उनका जति पुत्ला कसैका जलेनन्, उनी धेरैका घृणाका पात्र पनि बने। तर यो सत्य हो कि उनको मृत्युमा देश शोकमा डुबेको छ। भलै यो कुनै असामयिक निधन थिएन, र उनको मृत्यु प्राकृतिक नै थियो। रेडियोहरुमा शोकधुनहरु बजिरहेका छन्। राष्ट्रले तीन दिन शोक मनाउने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसो त शुक्रबार राति नै संकेतहरु देखिइसकेका थिए। तर सीधै लेख्‍न नमिल्ने। बिहान ५ बजे अचेत भएका उनको मध्याह्न १२:१० मा निधन भएको रहेछ र घोषणा भने साढे एक बजे भएको रहेछ। पूर्व राष्ट्राध्यक्ष भएको नाताले उनको राजकीय सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टी हुँदैछ। एफ एम त्यसमा सुनेको जानकारी अनुसार आज चक्रपथभित्र सवारी साधन चलाउन रोक लगाइएको छ। बिहान १५ मिनेट जति कोइरालको पार्थिव शरीरलाई पार्टी कार्यालयमा राखेपछि दशरथ रंगशाला ल्याइएको छ। थुप्रै संख्यामा मानिसहरु अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि भेला भएका छन्। २ बजेसम्म त्यहाँ राखेपछि राजकीय सम्मानका साथ तोप पड्काएर सलामी दिई पशुपति आर्यघाटमा उनको अन्त्येष्टी गरिनेछ।
कोइरालाको जीवन विवादैविवादले घेरियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि उनी एक राजनेताका रुपमा सम्मानित पात्रका रुपमा बाँच्ने र सँधैका लागि अमर हुने एउटा सुनौलो मौका आएको थियो। तर पारिवारिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर उनले त्यो मौका गुमाए। छोरीको मोहले राजनीतिमा उनलाई उनकै पार्टीका कनिष्ठ नेता खुमबहादुर खड्काले समेत गाली गरेर भाषण गर्ने स्थिति निम्तियो। तथापि दोस्रो जनआन्दोलनमा उनको योगदान अतुलनीय छन्। उनी तिनै गिरिजा थिए, जो रत्‍नपार्कमा बुढ्यौलीले छोएको शरीरको वास्ता नगरी सडकमा बसेका थिए। एमाले र देउवा काँग्रेसले प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै राजाको सरकारमा सहभागी हुन जाँदा पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एक मात्र मागमा अडिग भएर आन्दोलनमा डटेका थिए उनै गिरिजा। उनै गिरिजालाई एक पटक भूगोलपार्कमा निषेधित क्षेत्र तोड्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा घाइते भएको क्षणको साक्षी थिएँ म। जनआन्दोलन २ पछि उनले अभिभावकका रुपमा देशलाई नेतृत्व दिएको भए उनको उचाइ बेग्लै हुन्थ्यो। तथापि उनको नेतृत्व नभएको भए संविधान सभाको चुनाव सबैलाई चित्त बुझ्ने हिसाबले हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो त्यो पनि विवादको विषय हुनसक्छ। संविधान सभाको चुनावपछि पनि उनी विवादमुक्त हुन सकेनन्। छोरीलाई पार्टीको नेतृत्व गरी सत्ता पठाउने बेलामा र उपप्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा परिवार मोहको विषयलाई लिएर निकै आलोचना भयो।
माफ गर्नुस्, सामान्यतया मृत्युपछि कसैको गुणलाई मात्र हाइलाइट गरिन्छ र दोषलाई लुकाइन्छ। सर्वगुणसम्पन्नको जस्तो छवि देखाउन खोजिन्छ। तर वास्तवमा त्यसो गर्नु अन्याय हुनजान्छ। कसैको मृत्युपछि उनको गुणलाई सम्झनु त छँदैछ, दोषलाई पनि स्मरण गरेर उनको जस्तो गल्ती अरुले नगरुन् भन्ने अभिप्राय राख्‍नु उचित हुन्छ। निश्चय पनि समकालीन राजनीतिमा उनको जति उचाइ बनाएका नेता अहिले कोही छैनन्। त्यसै कारण राष्ट्र शोकमा डुबेको हो। तर आज आर्यघाटमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिन जाने बेलामा नेता र हामी आफैले पनि सोच्नुपर्छ-अन्ततः हाम्रो गन्तव्य, अन्तिम गन्तव्य यही चिता हो। छोरी सुजाता कोइराला, देउवा, रामचन्द्र पौडेल, सुशील कोइराला, प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सबै सबैले यो एउटा कुरा मात्र मनमा राखेर देशका लागि काम गरिदिए हामी सबैको कल्याण हुन्थ्यो कि -एक दिन तिमी पनि जानुपर्छ। के लानु छ र यहाँबाट ? हामी पनि यही सोचौँ। नकारात्मक भावनालाई त्यागौँ। मानवताविहीन कमेन्ट नगर्न हार्दिक अनुरोधका साथ परदेश को मरुभूमि कुवैतबाट म र परदेशबाशी सम्पूर्ण नेपाली को तर्फबाट स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलि।
« रंगशालामा स्व. कोइरालाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने क्रम जारी आदरणिय कुवैतवासी नेपाली दाजु-भाई तथा दिदी-वहिनीहरुमा सार्वजनिक अनुरोध »
kaluman & hima rai jhapa, on मार्च 22, 2010 at 4:35 बिहान said:
हो मनोज जि तेसैलाई भन्छन पोर मर्यो सासु अइले आयो आसु जिउदो हुँदा सबैलाई पुत्त्ला जलाउन हतार थियो अइलेत गर्नु पर्‍योनी मुख् मा राम राम बगलिमा चुरा होइन र्